News - Waxaan kuugu hambalyeynaynaa 11kv & 33KV hadda iyo kuwa danab dhaliyaha ka gudbaya baaritaanka KEMA
Waxaan kuugu hambalyeynayaa 11kv-ka iyo 33KV Transformers-ka hadda iyo danab gudbiyaha ee maraya baaritaanka KEMA
KEMA waa soo gaabinta Dutch (Keuring Van Elektrotechnische Materialen). Baaxadda ganacsiga ee KEMA si tartiib tartiib ah ayey u ballaarisay, Oo waxay noqotay hoggaamiye madax bannaan oo hoggaamiya warshadaha adeegyada tamarta adduunka. In kabadan 80 sano, KEMA waxay ka caawineysay macaamiisha inay saadaaliyaan jihada isbedelka iyo xalinta caqabadaha tamarta iyo utility ee adag. Wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa hubinta helitaanka, isku halaynta, joogtaynta iyo faa'iidada tamarta adduunka iyo wax soo saarka iyo geedi socodka la xidhiidha tamarta.
Mashaariic kala duwan oo adeeg ah, KEMA waxay ka ciyaareysaa doorka injineer, la taliye ganacsi, geedi socodka iyo khabiirka maaraynta isbeddelka. Laga soo bilaabo farsamada, maaraynta iyo istiraatiijiyadda sharciyeynta iyo qorsheynta naqshadaynta injineernimada, habka iyo fulinta waxqabadka kor u qaadista iyo qiimeynta, iyo warshadaha yutiilitida si loo helo ganacsi iyo xalal farsamo oo dhammaystiran.
KEMA waxay xarunteedu tahay magaalada Arnhem ee dalka Nederland, waxayna xarumo ku leedahay 20 dal oo adduunka ah. In ka badan sideetan sano, tayada, daacadnimada, isku halaynta iyo aqoonta xirfadeed waxay ahaayeen qiimaha asaasiga ah ee KEMA.
The 11kv iyo 33KV danab iyo isbadalada hada socda oo ay soo saartay warshadeena transformer-ka ayaa ka gudubtay imtixaanka KEMA waxayna heshay warbixinta baaritaanka KEMA.
Waxaan nahay soo saaraha korontada ee Shiinaha. Marka, dhammaan badeecadeenna si adag ayaa loo soo saaray iyadoo la tixraacayo ISO9001 & KEMA, waxaanna u dhoofineynaa in ka badan 30 xildhibaan waxayna aad ugu qanacsan yihiin tayadeena iyo adeegga iibka kadib.
Haddii aad u baahato, waad nagala soo xiriiri kartaa natiijooyinka baaritaanka KEMA ee rogayaashayada iyo buug-yaraha alaabtayada.
Waxaan rajeyneynaa inaan xiriir la sameysano isla markaana horumar wadajir ah sameyno.
Waqtiga boostada: Dec-30-2020